किशोर पहाडी , (काठमाण्डौं)
मसला पो भनी ठानेछु ।
समात्दा समात्दै चिप्लेर
पोखियो चारैतिर छररर...
आलु काटेको किन आकार भिन्दै छ ?
—तेलमा हालुँ कि नहालुँ भएछ ।
दालमा पानी हाल्ने ?
कि पानीमा दाल ?
तरकारीमा नून कति हाल्ने ?
यो खोर्सानीको धुलो हो कि
तिमी बिरामी हुँदा
पसेको छु भान्छामा,
कहाँदेखि शुरु गर्ने—
यो नियमित काम तिम्रो ?
स्वाद पुगेन भन्न सजिलो
नून धेरै भयो भन्न सजिलो
स्वाद र नून राख्न नै गाह्रो भइरहेछ ।
चिनी पो भनी ठानेछु ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Very Good comment by Acharya Prabha
उसो भए किशोर जी,एक पटक अमेरिका आउनु होस् न त । श्रीमती स्वस्थ्य भएपनि नुन,चिया,चिनी सबै बुढाहरूले चिनी हाल्छन् नी । चिन्नु मात्र कहाँ हो र ? पकाएर खुवाउन नै परिहाल्छ सबै बुढाहरूले ।